Kuthetha ukuthini ukuphupha ukwanga? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Iyintoni intsingiselo yokuphupha i-hug?
2 Ukuphupha ngokuwola kuyinto elungileyo okanye embi?
3 Intsingiselo yokuphupha malunga nokuwola kutata
4 Kuthetha ukuthini ukuphupha ubhuti ewola?
5 Intsingiselo yokuphupha ukwanga kukamakhulu
6 Kuthetha ukuthini ukuphupha umhlobo wangana?
7 Intsingiselo yokuphupha malunga nokuwola kothandekayo
8 Kuthetha ukuthini ukuphupha ukwanga ngothando?
9 Intsingiselo yokuphupha ukwanga okuqinileyo
10 Ithetha ukuthini iphupha lokuwola ngasemva?
11 Intsingiselo yokuphupha i-hug hug
12 Kuthetha ukuthini ukuphupha ufunjelwe yinja?
13 Intsingiselo yokuphupha malunga ne-bear hug
14 Kuthetha ukuthini ukuphupha utshaba lundanga?
15 Ngaba kulungile ukuphupha ukwangiwa?
Iyintoni intsingiselo yokuphupha i-hug?
Ukuphupha i-hug kungabonisa ukuba kufuneka ulumke nabantu abakungqongileyo. Kuyimfuneko ukuba ubakhathalele, funa unxibelelwano kwaye ngaphezu kwako konke ufune ubulumko ngokubhekisele kuwo onke la manqaku. Eyona nto ibaluleke kakhulu kule meko kukucinga ngazo zonke iimeko ukuze kungabikho kuzisola kwixa elizayo.
Eli phupha linokuthetha ukuba awuziva uthandwa ngabantu abakungqongileyo. Iya kuba lixesha lokuba uqaphele ukuba ekugqibeleni uqinisekile ngendlela abanye abakuphatha ngayo. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba uqaphele kwezi zigwebo, kuba kukho ithuba lokuba kukho iimpazamo ezithile.
Ukuphupha ngokuwola kuyinto elungileyo okanye embi?
Iintsingiselo ziya kuxhomekeka kumanqaku aliqela, oko kukuthi, kwelinye kunokuba kuhle kwaye kwabanye kubi. Ukuphupha i-hug kuthetha ukuba ukutolikwa kuya kuhlala kubonwa ngendlela eyahlukileyo.
Iphupha elifanayo linokuba neentsingiselo eziza kutshintsha ngokwabantu abaphuphayo. Ukutolikwa kuya kuxhomekeka kumanqaku aliqela kwaye eyona nto iphambili kukuzama ukulinganisa iphupha kwezi zihloko zilandelayo. Akukho nto ingcono kunokujonga apha ngezantsi ukufumanisa ukuba zithini iimeko ezahlukeneyo.
Intsingiselo yokuphupha malunga nokuwola kutata
Ukutyala imali kubudlelwane kwaye ngakumbi kwixesha olichitha nabazali bakho kuhlala kubalulekile. Ixesha lokwanga selifikile kwaye kuya kubaluleka ukuba ulumke ungalivumeli ixesha lidlule. Ngomso okanye ngosuku olulandelayo ukufa ingeza kwaye ukubakho kokuzisola kunokuba yinto enkulu kakhulu.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ubhuti ewola?
Umanyano kunye nosapho uluvo kufuneka lubekho kulo lonke ubudlelwane nomntakwenu okanye udadewenu. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukukwazi ukubenza babe namaxesha okuhlangana kunye nangaphezulu kwako konke ababala ngako omnye komnye.
Intsingiselo yokuphupha ukwanga kukamakhulu
Ukufunda ukuba bunjani ubomi nabantu abadala kuhlala kuyimfuneko kwaye kufuneka kuthathelwe ingqalelo. Ukuphupha i-Maw Maw hug ngumqondiso wokuba ufuna i-hug kwaye kuphela ngabantu abadala abanokukunika yona.
Kuthetha ukuthini ukuphupha umhlobo wangana?
Umanyano olukhoyo phakathi kwakho nabahlobo bakho yinto ebangela ukuthandwa kakhulu phambi kwawo wonke umntu. Zama ukuyigcina injalo kwaye uyakubona ukuba ibisesona sigqibo sihle sinokuthathwa, kuba sibonisa inzondelelo kunye nabo.
Intsingiselo yokuphupha malunga nokuwola kothandekayo
Indlela ozinike ngayo umntu omthandayo yinto ekufuneka ibonwe ngendlela eyahlukileyo. Mhlawumbi elinye icala alisebenzi ngale ndlela kwaye into ephambili iya kuba kukuhlalutya iimvakalelo, zama ukubona ukuba kufanelekile.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ukwanga ngothando?
Akukho nto ingangcono kunokuwola ngokwakho umntu owayekhona ephupheni lakho. Ukuphupha ngokuwola ngothando luphawu lokuba kuya kulo mntu kwaye uzame ukumanga ngokuqinileyo.
Intsingiselo yokuphupha ukwanga okuqinileyo
Imvakalelo ekhoyo yinto enxulumene nelifa kwaye ke ishiya imvakalelo yomona emoyeni. Eyona nto ibalulekileyo kukuthatha eli thuba ukuzama ukungaziminxi kwezi mvakalelo.
Ithetha ukuthini iphupha lokuwola ngasemva?
Eli phupha libonisa ukuba elinye iqela lifuna ukukulawula ngendlela engasoze ibenomdla. Zama ukuphaphama kwaye unqande ukuba naluphi na uhlobo lolwalamano oluhlukumezayo, kuba oko kuyingozi kakhulu.
Intsingiselo yokuphupha i-hug hug
Zonke iziphelo sisiqalo esitsha, ke eli phupha libonisa ukuba iimeko ezintsha ziya kuvela kuwe. Iya kuba ngumzuzu wokudityaniswa kwaye ngaphezulu kwako konke ukwenza yonke into ibe nexabiso. Zama ukuthathela ingqalelo iinkcukacha kwaye uqiniseke ukuba eli thuba lisetyenziswe ngokukuko.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ufunjelwe yinja?
Ezinye izinto zokungcatsha zinokwenzeka kuwe kwaye eyona iphambili iya kuba kukuzilungiselela ukuze ungafumani ziphumo. Ukuphupha ngokuwola inja kubonisa ukuba nzulu ezantsi kukho umntu ofuna ububi bakho, Oko kukuthi, ukuhlala uzilungiselele kakuhle.
Intsingiselo yokuphupha malunga ne-bear hug
Ukufuna uthando kunye nokuqwalaselwa kwiindawo zabantu yinto eyimfuneko ngamanye amaxesha, ke unayo le ntando. Zama ukuba phakathi kwabantu abenza uzive ukhuselekile kwaye abanye bahlala bezama ukwenza okufanayo.
Kuthetha ukuthini ukuphupha utshaba lundanga?
Lifikile ixesha lokuba uziphucule kwaye awukwazi ukuqhubeka nokwandisa konke oku. Kubalulekile ukuba ufunde ukubeka yonke into okhe wadlula kuyo ngaphambili, kuba ngoku lixesha lokwenza umahluko ebomini bakho.
Ngaba kulungile ukuphupha ukwangiwa?
Ewe kunye nohayi, ukuphupha ngokuwola kuya kuxhomekeka kwindlela abantu abafuna ukubona ngayo iimeko ezithile. Umzekelo, iglasi yamanzi enesiqingatha inokuthetha ukuba abanye igcwele kwaye abanye baya kucinga ukuba akunanto. Into ebaluleke kakhulu kukuzama ukufumana intsingiselo ehlala ihle.